Google Pixel Watch: Andininy voalohany sy daty famoahana | Androidsis
Herinandro lasa izay dia nambara fa miasa amin'ny smartwatch voalohany i Google. Izy io dia ho vokatra ho avy miaraka amin'ny telefaona Pixel vaovao, ary izany amin'izao fotoana izao dia fantatsika hoe Google Pixel Watch. Tsy nisy antsipiriany fantatra momba ity famataranandro ity, fa tato anatin'ny ora farany dia efa tonga ny fampahalalana voalohany momba izany.
Vaovao vitsivitsy izay avy amin'ireo mpiara-miasa aminay Phone Arena, aiza Nambara ny antsipirihany amin'ity Google Pixel Watch ity. Na dia toa azontsika atao aza ny manantena fa ny orinasa amerikana dia handefa famantaranandro telo fa tsy iray amin'ity fararano ity. Miaraka amin'izy ireo no tadiavina hampisondrotra ny Wear OS.
Izy io dia ho maodely telo, samy hafa habe ary azo vinavinaina amin'ny famaritana somary samihafa. Ny anarana kaodin'izy ireo dia Ling, Triton ary Sardine. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny fahasamihafana misy amin'ireo famantaranandro telo ireo, saingy tokony ho lehibe izy ireo, raha samy hafa ny fiantsoana ny tsirairay amin'izy ireo.
Google Assistant dia hiseho amin'ity Google Pixel Watch ity. Ao amin'ny Google I / O dia nanambara ny orinasa fa hisy fampidirana bebe kokoa ny mpanampy amin'ireo famataranandro miaraka amin'ny Wear OS. Ka antenaina fa hitranga izany amin'ny fahatongavan'ireto fiambenana vaovao telo ireto avy amin'ny orinasa. Ho fanampin'ny fanasongadinana indray ny maha-zava-dehibe ny mpanampy amin'ny paikadin'ny Amerikanina.
Toa ny hevitra dia hoe ny fanaraha-maso ny feo sy ny valinteny an-tsaina dia hiasa tsara kokoa. Satria io dia manakana ny mpampiasa tsy hirotsaka amin'ny efijery an'ity Google Pixel Watch ity. Zavatra tsy dia mahazo aina loatra amin'ny efijery kely. Etsy ankilany, antenaina fa hisy koa ny fanaraha-maso ny hetsiky ny mpampiasa.
Azonao atao ny mandrefy ny fitepon'ny fony na ny tosidranao amin'ireto Google Pixel Watch. Amin'ny famotsorana azy dia antenaina hitranga amin'ny fararano, azo inoana indrindra talohan'ny Krismasy. Saingy tsy maintsy miandry antsipiriany bebe kokoa isika vao ho fantatra rehefa mandeha ny herinandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Andininy voalohany momba ny Google Pixel Watch
Asphalt 9 Legends: Efa nosokafana tao amin'ny Google Play ny fisoratana anarana mialoha
Huawei Nova 3 dia nanasongadina ny TENAA